သြစတေးလျ ဝန်ကြီးချုပ် ရဲရဲတောက် မိန့်ခွန်း | မျိုးမြန်မာ
သြစတေးလျ ဝန်ကြီးချုပ် ရဲရဲတောက် မိန့်ခွန်း
Posted in: ရသစာပေ.	Tagged: မိန့်ခွန်း, ခေါင်းဆောင်, သြစတေးလျ ဝန်ကြီးချုပ်.	Leaveacomment
သူမဟာ မိမိရဲ့ ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ ရပ်တည်ချက်ကနေ လျော့မပေးနိုင်ကြောင်းကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုလိုက် တာကြောင့် သူမရဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခွင့် အရေးအပေါ် ယုံကြည်ချက်ကို ချီးကျူးထောပနာ ပြုသင့် လှပါတယ်။ ဒီလို တစ်ယောက်တစ်လေက ဦးဆောင်ပြောဆိုတာကို ကြား ရတော့ လေသင်းရနံ့လေးကို ရှူရှိုက်လိုက်ရသလိုပါပဲ။ “သြစတေးလျ ဝန်ကြီးချုပ် ထပ်မံပြောဆိုလိုက်ပြန်ခြင်း” ဒီအမျိုးသမီးကိုတော့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတောင် ခန့်အပ်ဖို့ ကောင်းနေပါပြီ။ ဒီထက်မှန်တဲ့စကားမျိုးကို ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ကြဘူးပါလား။ ဒီအမျိုးသမီးဟာ သတ္တိဗျတ္တိအတော်အတန်ရှိသူမို့ ကမ္ဘာက ကြားသင့်တဲ့ ဒီစကားမျိုးကို ပြောဝံ့တာပါ။ တုံ့ပြန်မှုတွေကို အကြီးအကျယ် ရှိလာနိုင်စရာပါ။
ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံး သူမဟာ သူနဲ့သြစတေးလျ နိုင်ငံရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို ချပြလိုက်တာပါပဲ။ ၀န်ကြီးချုပ် ဂျူလီယာဂျေးလတ်က အစ္စလာမ်ရှရိယာဥပဒေနဲ့အညီ နေထိုင်လိုတယ်ဆိုတဲ့ သြစတေးလျ မွတ်စ်လင်တွေကို ဒီကထွက်သွား ကြဖို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ကြီးတွေကို တားဆီးနုင်ဖို့ရာ အစိုးရင အစွန်းရောက်သမားတွေအပေါ် ဦးတည်အာရုံစိုက်နေချိန် ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။ သီးခြားအနေနဲ့ ဂျေးလတ်က သူမဟာ နိုင်ငံက မွတ်စ်လင်ဗလီတွေကို သူလျှိုအဖွဲ့အစည်းတွေက စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေတာကို ထောက်ခံ အားပေးကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောကြားလိုက်လို့ သြစတေးလျမွတ်စ်လင် များကို ဒေါသထွက်စေခဲ့တာပါ။
သူ့စကားတွေကို ကိုးကားရရင် –
“ပြည်ပက လာရောက်နေထိုင်သူတွေကသာ အသားကျအောင် လုပ်ရမှာ လေ၊ သြစတေးလျသားတွေက လုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ နေချင်နေ၊ မနေချင် ထွက်သွား”
“တို့ဟာ တချို့ပုဂ္ဂလိကတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကို စော်ကားနေမိ သလားဆိုတာကို တွေးတွေးပူနေရတဲ့ ဒီနိုင်ငံအတွက် ကျွန်မငြီးငွေ့လာရ ပါပြီ။ ဘာလီကျွန်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးကတည်းက ကျွန်မတို့ သြစတေးလျသား အများစုမှာ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေ တရှိန်ထိုး တိုးမြင့်လာတာ လက်တွေ့သိ ခဲ့ရပြီ”
“ကျွန်မတို့ ယဉ်ကျေးမှုဟာ အနှစ် ၂၀၀မျှမက အမျိုးသား အမျိုးသမီး သန်း ပေါင်းများစွာက ရုန်းကန်ကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်အောင်ပွဲဆင်ပြီးမှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာခဲ့တာပါ”
“ကျွန်မတို့ အင်္ဂလိပ်စကားကိုပဲ အဓိကပြောပါတယ်။ စပိန်၊ လက်ဘနွန်၊ အာရပ်၊တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ရုရှားနဲ့ အခြားဘာသာစကားတွေမပြောပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရှင်တို့ ကျွန်မတို့လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အပါအ၀င်ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရင် ဒီဘာသာစကားကို သင်ကြားပါ”
“သြစတေးလျလူမျိုးအားလုံးဟာ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ခရစ်ယာန် တချို့တလေကြောင့်၊ လက်ယာဝါဒီကြောင့်၊ နိုင်ငံရေးနှိုးဆော် ချက်စတာတွေကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ က ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကို ခရစ်ယာန်အယူဝါဒအပေါ် အခြေပြုကာ ထူထောင် ခဲ့ကြကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာ ကမ္ဗည်းအက္ခရာတင်ခဲ့ကြတာပါ”
“ဒီအကြောင်းကို ကျွန်မတို့ စာသင်ခန်းနံရံတွေမှာ ဖော်ပြထားနိုင်မယ်ဆိုရင် သင့်လျော်မှာပါ။ ဘုရားသခင်နဲ့သင် အဆင်ပြေဖို့မရှိဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့အိမ်ယာ သစ်အတွက် ကမ္ဘာ့အခြားတစ်နေရာမှာသာ စဉ်းစားပါတော့လို့ ကျွန်မအကြံ ပေးပါရစေ”
“ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘုရားသခင်က ကျွန်မတို့ ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လို့ပါပဲ”
“ကျွန်မတို့ဟာ သင်တို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို လက်ခံပါတယ်။ ဘာညာမေးခွန်း ထုတ်နေမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ တောင်းဆိုနေတာတစ်ခုလုံးက သင်လည်း ကျွန်မတို့ယုံကြည်ချက်တွေကို လက်ခံဖို့၊ ကျွန်မတို့နဲ့အတူတကွ အေးအေးချမ်းချမ်း အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်သွားကြဖို့ပါပဲ”
“ဒါဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့တိုင်းပြည်၊ နယ်မြေ နေထိုင်မှုပုံစံပါ။ အဲဒီ့ခံစား စံစားခွင့် အားလုံးကို သင်တို့ကို ကျွန်မတို့က ပေးအပ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် သင်က ကျွန်မ တို့ရဲ့ အလံ၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ အဓိဋ္ဌာန်၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ ခရစ်ယာန်အယူ သို့မဟုတ် ကျွန်မတို့ လူနေမှုဘ၀ကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် ငြင်းခုံလာမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မ အလေးအနက် အားပေးချင်တာကတော့ သြစတေးလျသားတို့ရဲ့ အခြားသော လွတ်လပ်ခွင့်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ထွက်သွားနိုင်ခွင့်”ကို ရယူ လိုက်ကြဖို့ပါပဲ”
“သင် ဒီမှာမပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင် ပြန်သွားပါ။ ကျွန်မတို့ သင့်ကို အတင်းလာ ခိုင်းခဲ့တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ကသာ လာနေပါရစေလို့ တောင်းဆိုခဲ့ တာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ကို လက်ခံတဲ့ နိုင်ငံကို သင်ကလည်း လက်ခံပေးပါ။”
ဒါကတော့ သြစတေးလျ ဝန်ကြီးချုပ် ဂျူလီယာဂျေးလတ်ဆိုတဲ့ မိန်းမသား တစ်ယောက်ရဲ့ ရဲရဲတောက်မိန့်ခွန်းပါပဲ ..။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် များ၊ လူထုခေါင်းဆောင်များနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်း၊ သူ့အတွေး၊ သူ့ခံယူချက်တွေဟာ လေးစားစရာ၊ အား ကျစရာ၊ လိုက်နာစရာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ..သင်လည်း မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတစ် ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ထပ်တူခံစားနားလည်နိုင်မှာပါ။
ဒါကြောင့် ..မြန်မာတွေကို သိစေချင်တာက …
နဂါးမင်း(၀ါ) ကုလားပြေး စစ်ဆင်ရေး နှင့် ဟင်္သာစီမံချက် →